प्रहरीले उजुरी लिन नमान्दा आकृतिको शव दश दिनदेखि अस्पतालमै
उपचारका क्रममा सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा ज्यान गुमाएकी पाँच वर्षीया बालिका आकृति साह। फाइल तस्वीर
काठमाडौं, जेठ १ : पाँच वर्षीया छोरी आकृतिको शव शिक्षण अस्पतालमा राखेर सर्लाहीको गोरेता नगरपालिका–१० का रामप्रवेश साह दश दिनदेखि काठमाडौंमा चक्कर लगाइरहेका छन्। तर, प्रहरी र मेडिकल काउन्सिलले उनको उजुरी लिनै मानेको छैन।
चिकित्सकले गलत रगत चढाउँदा आकृतिको दश दिनअघि सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा मृत्यु भएको थियो। त्यसयता उनी छोरी शव त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा राखेर प्रहरी कार्यालय धाइरहेका छन्।
काठमाडौंमा कुन कार्यालय कहाँ छन्? भन्ने समेत थाहा नभएका उनी आफ्ना मित सुरेन्द्र यादवलाई लिएर दैनिक प्रहरी कार्यालय, नेता, अधिकारीवादी संघसंस्था, मेडिकल काउन्सिल सबैतिर धाइरहेका छन्। ‘छोरीको शव अस्पतालमा छ, पोस्टमार्टम पनि भएको छैन। गाउँमा बिचल्ली छ। काठमाडौंमा कसैले हाम्रो कुरा सुनिदिँदैनन्,’ साहले गुनासो गरे।
उनी पहिलो पटक महाराजगञ्जस्थित चक्रपथ प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन पुगेका थिए। तर, प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन। जाहेरीमा आकृतिको शल्यक्रियामा संलग्न डा. ज्योतिन्द्र शर्मा, डा.रविन्द्रभक्त तिम्ले, डा.नविनचन्द्र गौतमको नाम उल्लेख गरिएको थियो। चिकित्सकको नाममा जाहेरी नलिने भन्दै प्रहरीले साहलाई फिर्ता पठाइदियो।
त्यसपछि उनी टेकु प्रहरी कार्यालय पुगे। त्यहाँ पनि प्रहरीले उजुरी नै नलिएको उनले बताए। थाहा पाए जति सबै प्रहरी कार्यालय पुग्दा पनि उजुरी लिन नमानेपछि उनी निराश छन्।
‘प्रहरी भन्छ, डाक्टरको नाम नतोकेर जाहेरी दिनुस्,’उनले भने,‘तर, हामीलाई शंका तीनै जना चिकित्सकमाथि छ किन नाम नलेख्ने?’
चिकित्सकको नाममा उजुरी दिँदा आन्दोलन हुने भएकाले नाम नराखेर उजुरी दिनु पर्ने प्रहरीले बताएको उनले जानकारी दिए। प्रहरीले उजुरी लिन नमान्दा दश दिनसम्म बालिकाको शवको पोस्टमार्टम हुन सकेको छैन।
पाँच वर्षीया आकृतिलाई वैशाख १३ गते बाँसबारीस्थित सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा भर्ना गरियो।
बालिकाको मुटुभित्र प्वाल र फोक्सोमा जाने रगतका नलीहरु साघुँराे भएकाले ‘ओपनहर्ट’ सर्जरी गर्नुपर्ने चिकित्सकले बताए। त्यसपछि आकृतिको वैशाख १७ गते शल्यक्रिया गर्ने तय गरियो। साहलाई शल्यक्रियाका लागि ‘ए पोजेटिभ’ रगत जुटाउन चिकित्सकले भने। त्यही अनुसार उनले रगत संकलन गरे।
तर, शल्यक्रिया भएको केही घण्टामै आकृतिको मृत्यु भयो। रिपोर्ट हेर्दा ‘ओ पोजेटिभ’को सट्टा ‘ए पोजेटिभ’ रगत चढाएको पाइयो। अहिले भने अस्पतालले रोगसम्बन्धी तीन वटा रिपोर्टमा टिपेक्स लगाएर ‘ओ पोजेटिभ’को ठाउँमा केरमेट गरेर ‘ए पोजेटिभ’ लेखेको छ।
त्यस्तै, शल्यक्रिया गर्नु अघि बालिकाका आफन्तसँग बिरामीको खतरा हुने सम्भावना एकदेखि दुई प्रतिशत लेखिएको ठाउँमा अहिले केरमेट गरेर २० प्रतिशत लेखिएको छ।
पीडित परिवारले मागे न्याय
यसैबीच, बालिकाका बाबु साहले न्यायका लागि सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्।
रिपोटर्स क्लब बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनले आफ्नो पीडाको विषयमा बोलिदिने कोही नभएकाले समस्यामा परेको बताए। रामप्रवेशले छोरीको शव कहाँ राखेको छ? भन्ने कुरा पनि आफूले अहिलेसम्म थाहा नपाएको बताए।
‘मलाई त न्याय चाहिएको छ। तर, खुरुक्क शव लिएर जान, बढी बोले तलाई नालामा फालिदिन्छु भनेर मलाई धम्की दिने गरेका छन्,’उनले भने।
पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले गलत रगत चढाइनु चिकित्सको लापरवाही भएको बताए। उनको पीडित परिवारले चिकित्सकविरुद्ध उजुरी दिँदा प्रहरीले लिन नमान्नु दुःखदायी भएको बताए।
‘यस्तो मुद्दामा फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउनु पर्ने हो,’ अधिवक्ता भण्डारीले भने,‘सर्वसाधरण नागरिकको जीवनसँग खेलवाड गर्ने अधिकार चिकित्सकसँग छैन।'
Published Date: Wednesday, 15th May 15:53:55 PM